We She Me: သမီးလေး ဖွားစဉ်က (၁)
imaginary clouds no2 - 7/15/07, 3:28 PM
အန်ဒီ ဒီလို သေသေချာချာ အသေးစိတ်ရေးတာ ကျနော်မဖတ်ဖူးဘူး ။ သိသင့်တာတွေ ကို ရှယ်လုပ်တာမိုက်တယ် ။ ဒီ ကိစ္စ က အရေးကြီးတဲ့ဟာပဲ။
Anonymous - 7/15/07, 8:51 PM
ဟိုက် မိန်းမကို တယောက်တည်း ထားခဲ့တာလာဟင် ။ အမက သတ္တိရှိလိုက်တာ ။ ကျမသာသူ့နေရာဆိုရင် .. နေရဲမှာမဟုတ်ပါ ။
အောင်မလေး ကလေးတယောက်မွေးဖို့ မလွယ်ဘူးနော် ။
အမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အတွေ့ အကြုံတွေရေးပါဦး ။ မိခင်တွေအတွေ့ အကြုံသိချင်တာ သက်၂ပါ.. တခြား အကြောင်းမရှိပါ အဟီး ။
Andy Myint - 7/15/07, 11:11 PM
နောက်နေ့ အတွက် အားမွေး ထားတာလေ.. တကယ်လည်း ပြန်လိုက်တာ မှန်သွားတယ်။
အတွေအကြုံတွေ သိချင်လည်း ရပါတယ်.. Apply လုပ်မယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်.. ဟဲဟဲ။
Anonymous - 7/16/07, 1:17 AM
အဟီး apply တော့မလုပ်ပါရစေနဲ့ဦး ။
ဒါနဲ့ seen be seen ကိုလည်း ရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါဦး ။ သူလည်း ကြက်ဥလိုနေဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး ကြက်ဥဖြစ်သွားလား မသိး)
heain heain - 8/30/14, 5:41 PM
ကလေးမွေးဖို့ ဆေးရုံသွားရင် ဘာတွေယူသွားရမလဲ....?
heain heain - 8/30/14, 5:42 PM
ကလေးမွေးဖို့ ဆေးရုံသွားရင် ဘာတွေယူသွားရမဲ....?